VST virtual synthesizer maka ọhụụ, na naa & ụlọ music
Adventus VST - Gị Na, Tekno, Na music ngwa mgbakwunye
VST ngwa mgbakwunye - Virtual synthesizer Adventus VST ngwá bụ ọhụụ, ụlọ, Tekno music gbakwasara softsynth. ma i nwere ike ime ihe ọ bụla na ụdị music, dị na-agbalị nke ngosi. Ọdịnihu Music (UK) magazine ikwu: "Adventus look like something you want to get playing right away."
Adventus VSTI | Ike VST ngwá ngwa mgbakwunye
Top maka Na, na naa, Techno, Ụlọ, Na music. Adventus VST ngwa mgbakwunye ga-anapụta ma na-enyere gị aka ike abụ na ị alway rọrọ nke.
VST ngwa mgbakwunye - VST ụbọ - Adventus VST
Na-achọ abụba edu, pad, basses maka Na, na naa, Techno, Ụlọ, Na? Lee ọ gara n'ihu! . Adventus VST softwares ga-anapụta ma na-enyere gị aka ike abụ na ị alway rọrọ nke ka, Dj Fudge, Deadmau5, Tiesto, Paul Van Dyk na ọtụtụ ndị ọzọ. - Kọmputa Music (UK) magazine
$39.99 Tinye na ụgbọ ibu
Ukwu mbata VSTI + DF
$55.99 Tinye na ụgbọ ibu
TB 303 Bass Reason mejupụta
$14.99 Tinye na ụgbọ ibu
M na dị nnọọ emailing gị zitere gị ụfọdụ otuto gị Adventus plugin. My aha Bram Bos, na-ede akwụkwọ nke egwú égwu ka hammerheard, Tuareg, Tu2 na Steinberg B.Box. Ugbu a ka m na-arụ ọrụ a na-agbanwe, ma dị mfe iji VSTi / ọdịyo sequencer. M zụtara gị plugin ka m otu n'ime isi ule VSTi si. M na-ekwu na Adventus nwere ọtụtụ ọmụmụ na nnukwu ihe nzacha m mgbe nụrụ ọ bụla rọrọ synth. Na ụda nnọọ kwesịrị ya!
M na-agbalị nke Adventus ngosi ama okokot banyere ya na Ọdịnihu Music ma n'anya ya zụtara ya ozugbo! Iji kwesịrị gị oge obula ugbu a,. Dị oké sounding VSTi (ọbụna utịp oyi – nke nwere ike ghara kwuru n'ihi na ọtụtụ VSTis!) Akwa GUI – ọma layed si. Ala processer ojiji (mgbe niile dị mkpa!)..
Ndewo !! Dị nnọọ wan't ikwu na nke a obere mpempe software bụ absolutley ịtụnanya m pụtara na ọ. N'ihi na ụdị ego !!! II n'anya ọ bụla otu preset na ihe a . Ọ na-ada kpam kpam abụba!!! M a ụda freak m niile music dabeere mbụ presets mere eso, ma nke a na-absolutley plọg na ike mpempe vst. na-ahụ ihe ọma n'ọrụ.
Ndewo Gino, Daalụ maka inye kacha Na synths n'ihi na nke a dị ịtụnanya ọnụahịa. M okoyomde ọtụtụ afọ ugbu a ịhụ ihe ọ bụla na-enye otu ke kpukpru Na synth ruo mgbe m bịara gafee na nke gị. M wee abiak n'ihu iji chọta ezi ụda m egwu ma ama na-eji ọtụtụ ngwá ọrụ na synths bịa ye ikike ụda. Ugbu a, m na-adịghị anya ọ bụla ọzọ. Gị synths na ụda niile m kwesịrị iji bụ Adventus 1.5 na ADF. A ụbọ dị nnọọ mma m mgbe dị iji dee Na music e nweghị ndị ọzọ ngwá dị ka ya tinye ọnụ zuru okè Na song. Ọ dịghị onye nke ọzọ ngwá ọbụna jiri aka gị. Ọ dị mfe ma o enyi m na-enwe ike tweak ụda ke ada. M na-atụ anya ihe patches ma ọ bụ ihe ọ bụla mmelite nke ga-enyere m aka họrọ ụda mfe.
Download mbata VSTI & DF adventus demo plugin
Adventus VSTi – Kwalite asụsụ ọma na synthesizer
Adventus VST ngwá bụ Na Tekno music gbakwasara softsynth. ma i nwere ike ime kwa ụdị egwu ọ, dị na-agbalị nke ngosi.
“Ọdịnihu Music” (UK) magazine ikwu:
“Adventus dị ka ihe ị na-achọ ka egwu na-akpọ ozugbo.”
Buy aNweta mbata VSTI
Adventus DF – Kwalite asụsụ ọma na synthesizer.
The akwụkwọ ozi DF bụ maka "Ugboro abụọ iyo" a VST Instruments version abụọ nyo nwere ike iche ekpe ma ziri ezi, niile oscillator na abụba nhọrọ na-splited ekpe ma nri, nke a nye ihe a obere synth a sara mbara nke ukwuu stereo ụda.
Buy aNweta Adventus DF
Propellerhead Ihe ReFills
Egwu TB 303 ịmachi nke Ihe, Kacha mma TB 303 ụda gị nwere ike inweta n'aka Subtractor Ihe modul, ị, TB Na ụda, 303 Ebute Ụzọ, Acid, TB FX na mores.
Buy aTB 303 Mejupụta